တီဗီဖို့ HARD DRIVE ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို - HARD DISK ကို - 2019
တီဗီဖို့ hard drive ကိုချိတ်ဆက်ပါ
Microsoft Word ကိုကြီးမား, Multi-စာမျက်နှာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အလုပ်လုပ်အချို့အပိုင်းအစများသို့မဟုတ်ဒြပ်စင်၏အညွှန်းနှင့်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူအခက်အခဲများများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သဘောတူ, banal mouse ကိုဘီး scrolling နိုင်ပါတယ်အလေးအနက်ထားတာယာ, မျိုးစုံကဏ္ဍများရှိကြောင်းစာရွက်စာတမ်းအတွက်အလိုရှိသောနေရာသို့ရွှေ့ဖို့ဒါလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ကောင်းပြီ, အကြောင်း, နှုတ်ကပတ်တော်၌ထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, သငျသညျကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါး၌ဆွေးနွေးရန်တံ့သောဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်သွားလာမှု pane ထဲကကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျသွားလာမှုဧရိယာမှတဆင့်စာရွက်စာတမ်းသွားလာနိုင်သည့်နေဖြင့်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ ဒီ tool ရုံးအယ်ဒီတာအသုံးပြုခြင်း, စာရွက်စာတမ်းစာသား, စားပွဲ, ဂရပ်ဖစ်ဖိုင်များ, ဇယား, ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အခြားဒြပ်စင်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သွားလာမှု pane ကမြို့သားပါရှိသောစာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်ခေါင်းစီးအချို့စာမျက်နှာများကိုမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်ကို header ကိုအောင်လုပ်နည်း
နှုတ်ကပတ်တော်၌သွားလာမှု pane ထဲကကိုဖွင့်နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်
အဆိုပါ tab ကိုရှိ Quick Access ကို toolbar ကိုတွင် 1. "အိမ်" tools တွေကိုအပိုင်းအတွက် "တည်းဖြတ်ခြင်း" စာနယ်ဇင်းများ "ကိုရှာပါ".
2. သတင်းထုတ် « CTRL + F ကို» ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။
စာရွက်စာတမ်း window တွင်ကျန်ကြွင်းရစ်သောနာမတျောနှငျ့ပုံပေါ် "Navigation"ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးရန်အရာအားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ခြေ။
အညွှန်း Tools များ
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌မျက်စိဖမ်းမိသောပထမဦးဆုံးအရာ "Navigation" - တကယ်တော့အဓိကအလုပ် tool ကိုတည်းဟူသောရှာဖွေမှု string ကို။
စာသားထဲမှာညာဘက်စကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုကိုရှာဖွေ, ရိုးရိုးရှာဖွေရေးအကွက်တွင်မိမိအ (သူမ၏) ရိုက်ထည့်ပါ။ ကစကားလုံး / ထားသောစာပိုဒ်တိုများရဲရင့်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြသည်အဘယ်မှာရှိရှာဖွေရေးအကွက်အောက်ရှိပုံငယ်များ၏ပုံစံအတွက်ချက်ချင်းပြသပါလိမ့်မည်စာသားထဲမှာစကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုချထားပါ။ တိုက်ရိုက် document ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦးစကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုမီးမောင်းထိုးပြဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: တချို့အကြောင်းပြချက်ရှိလျှင်, ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုကိုအလိုအလျောက်ပြသကြသည်မဟုတ်, စာနယ်ဇင်း « ENTER » ဒါမှမဟုတ်လိုင်း၏အဆုံးမှာ search button ကို။
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုများစာသားအပိုင်းအစတွေကြားကအစာရှောင်ခြင်းအညွှန်းနှင့် switching, သင်ရိုးရှင်းစွာ thumbnail ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦး thumbnail ကိုကျော် mouse ကိုပျံဝဲလိုက်တဲ့အခါ, သင်စကားလုံးများကိုသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုများ၏အထပ်ထပ်ကိုရှေးခယျြထားတဲ့အပေါ်စာရွက်စာတမ်း၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များပါရှိသည်ရသောသေးငယ်တဲ့အစွန်အဖျား, ကြည့်ရှုပါ။
စကားလုံးများနှင့်စာပိုဒ်တိုများ၏လျင်မြန်စွာရှာဖွေမှု - ဤသင်တန်း၏, အလွန်အဆင်ပြေပြေနဲ့အသုံးဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ကသာအခွင့်အလမ်းပြတင်းပေါက်မဟုတ်ပါ "Navigation".
နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ရန်ပုံငွေ၏အကူအညီ "Navigation" နဲ့, သင်တ္ထုကိုရှာခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောနိုငျသညျ။ ဒါဟာစားပွဲ, ဂရပ်များ, ညီမျှခြင်း, ကိန်းဂဏန်းများ, အောက်ခြေ, မှတ်စု, etc နိုင်ပါတယ် အားလုံး, သင်သည်ဤအမှုကိုရှာဖွေရေး menu ကို (ရှာဖွေရေးဘားရဲ့အဆုံးမှာသေးငယ်တဲ့တြိဂံ) ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အရာဝတ္ထု၏သင့်လျော်သောအမျိုးအစားကိုရွေးဖို့လိုပါတယ်။
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်အောက်ခြေမှတ်ချက် add ဖို့ကိုဘယ်လို
ရွေးချယ်ထားသည့်အရာဝတ္ထုများ၏အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ကချက်ချင်း (ဥပမာ, နေရာအောက်ခြေ) သို့မဟုတ်သင် (ဥပမာ, တစ်ဦးကလာပ်စည်း၏စားပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ် contents တွေကိုထံမှကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုး) ကိုတောင်းဆိုချက်အတွက် data တွေကို string ကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက်စာသားထဲမှာဖော်ပြပါတယ်။
သွားလာမှု tool များ၏ parameters တွေကိုချိန်ညှိခြင်း
သည် "Navigation" အပိုင်းမှာတော့တော်တော်များများ Configure လုပ်လို့ရတဲ့ parameters များကိုရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုဝင်ရောက်ဖို့, သင်ရှာဖွေရေးဘား menu ကို (၎င်း၏အဆုံးမှာတြိဂံ) လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နဲ့ select လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ် "Options ကို".
အဆိုပါပေးတဲ့ dialog box ကိုခုနှစ်, "ရှာရန် Options ကို" သင်မှတ်စိတ်ဝင်စား checkboxes ကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ခြင်းသည်အားဖြင့်လိုအပ်သော setting များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အထိခိုက်မခံ - စာသားကိုရှာဖွေရေးကိစ္စတွင်အထိခိုက်မခံကြပါလိမ့်မည်ဟုသင်တို့အားရှာဖွေရေး box ထဲကစကားလုံး "Find" ရိုက်ထည့်လျှင်, အစီအစဉ်ကိုသေးငယ်တဲ့စာလုံး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဟူသောစကားလုံးကို "ကိုရှာဖွေ" တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သာထိုကဲ့သို့သောအရေးအသားရှာဖွေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပြောင်းပြန်သက်ဆိုင် - တက်ကြွစွာ parameter နဲ့သေးငယ်တဲ့စာလုံးအတွက်စကားလုံးရေးမှတ်ဖို့ "Sensitive" သငျသညျသမ်မာကမျြးပေးမယ့်မြို့တော်အက္ခရာနှင့်တူညီသောစကားလုံးလက်လွတ်ဖို့ရှိသည်နားလည်ပါသည်။
မြေတပြင်လုံးစကားများသာ - သင်တို့ရှိသမျှသည်၎င်း၏စကားလုံးပုံစံများ၏ search results မှထုတ်ပယ်ရန်အထူးစကားလုံးကိုရှာတွေ့ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာထဲမှာ, Edgar Allan ဖိုးရဲ့ "Usher ရဲ့အိမ်၏ကျဆုံးခြင်း" ၏စာအုပ်ထဲတွင်အာရှာတဲ့မိသားစု၏နာမတော်ကိုအတော်လေးအကြိမ်အနည်းငယ်တွေ့ရှိရပြီးကွဲပြားခြားနားသောစကားလုံးပုံစံများဖြစ်သည်။ ဘေးက parameter သည်ရန်အကွက်ကို Check "သာလျှင်တပြင်လုံးကိုစကားလုံး"ဒါဟာသူ့ရဲ့ကျဆင်းမှုနှင့်အတူတူပင်အမြစ်ကိုမဖျက်ပစ်အားဖြင့်စကားလုံး "Usher" ၏အားလုံးကွိတွေ့ရှိရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သံခိတ် - ရှာဖွေရေးအတွက်သံခိတ်သုံးစွဲဖို့နိုင်စွမ်းပေး။ အဘယျကွောငျ့မဟုတျလော ဥပမာ, စာသားထဲမှာရှိအတိုကောက်ဖြစ်ပြီး, သငျသညျက၎င်း၏စာလုံးသို့မဟုတ်သင်အပေါငျးတို့သအက္ခရာများ (ဒီဖြစ်နိုင်ညာဘက်ကြောင့်?) သတိရမဆိုအခြားစကားလုံးကသာအနည်းငယ်သတိရပါ။ တူညီတဲ့ "Usher" ၏စံနမူနာစဉ်းစားပါ။
သင်တဦးတည်းကနေတဆင့်စကားလုံးအတွက်အက္ခရာများသတိရဆိုပါစို့။ ပစ္စည်းဆန့်ကျင်အမှတ်အသားချိန်ညှိခြင်း "သံခိတ်"သငျသညျရှာဖွေရေး bar မှာရေးလိုက် "နှင့်? အီး? အို" နှင့်ရှာဖွေရေးကို click နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပထမဦးဆုံးအက္ခရာ "a" ကို, တတိယစကားတော် (နှင့်စာသားအတွက်နေရာတစ်နေရာ) ၏အားလုံးရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် - "။ ၏" "e", နှင့်ပဉ္စမ ရှိသမျှသည်အခြားသောအလယ်အလတ်စကားအက္ခရာများအဖြစ်သင်္ကေတများနှင့်အတူနေရာများ, တန်ဖိုးများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
မှတ်ချက်: သံခိတ်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကအသေးစိတ်စာရင်းကိုတရားဝင် website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် microsoft Office.
တစ်ဦးပေးတဲ့ dialog box ထဲမှာပြောင်းလဲသွားတယ် settings ကို "ရှာရန် Options ကို"လိုအပ်သောဆိုပါကခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသောက default အဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည် "ပုံမှန်".
ဒီ button ကိုပြတင်းပေါက်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် "အိုကေ"ပြီးခဲ့သည့်ရှာဖွေမှုကိုရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်, နှင့် pointer စာရွက်စာတမ်း၏ထိပ်သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
ဝန်လေးသော "Cancel" ဒီ window ထဲမှာကရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုရှင်းလင်းပါဘူး။
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်၌ရှာဖွေရေး function ကို
သွားလာမှု tools တွေကိုသုံးပြီးစာရွက်စာတမ်းမှတဆင့် Moving
အပိုင်း "အညွှန်း"အမိန့်များနှင့်လျင်မြန်စွာနဲ့အလွယ်တကူစာရွက်စာတမ်းမှတဆင့်သွားလာရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်လျင်မြန်စွာရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုမှတဆင့်ရွှေ့ဖို့, သင်ရှာဖွေရေးအကွက်အောက်ရှိအထူးမြှားကိုသုံးနိုင်သည်။ မြှား - ချယခင်ရလဒ် - နောက်တစ်နေ့။
သငျသညျခေါင်းစဉ်များတည်ထောင်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်များအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြစာသား Built-in စတိုင်များတည်၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုလျှင်, partition ကို layout ကိုအတွက်လည်းဒီဇိုင်း, တူညီတဲ့မြှားကဏ္ဍမှတဆင့်သွားလာရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့နဲ့ tab သို့ပြောင်းရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် "ခေါင်းစဉ်"ရှာဖွေရေးအကွက်တွင်လိုင်းအောက်မှာတည်ရှိပြီး "Navigation".
tab ကို "စာမျက်နှာများ" သငျသညျ (သူတို့ကိုပြတင်းပေါက်၌နေရာချပါလိမ့်မည်စာရွက်စာတမ်းအပေါငျးတို့သစာမျက်နှာများပုံစံငယ်များတွေ့နိုင်ပါသည် "Navigation") ။ လျင်မြန်စွာရိုးရှင်းစွာသူတို့ထဲကတဦးတည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါစာမကျြနှာအကြားအကူးအပြောင်းရန်။
ပြတင်းပေါက် "Navigation" ပိတ်
စာရွက်စာတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူအားလုံးလိုအပ်သောခြေလှမ်းများပြီးသွားချိန်သင်ကပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့နိုင်ပါတယ် "Navigation"။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ရိုးရှင်းစွာပြတင်းပေါက်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ပြတင်းပေါက်ခေါင်းစဉ်ဘား၏ညာဘက်ဖို့မြှားကို click နိုင်ပြီး, ထိုအရပ်၌ command ကိုရှေးခယျြ "ကိုပိတ်ပြီး".
စာသားအယ်ဒီတာခုနှစ်, Microsoft Word ကို, 2010 ဗားရှင်းနဲ့စတင်, ရှာခြင်းနှင့်အညွှန်း tools တွေကိုအစဉ်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနေကြသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏တစ်ဦးချင်းစီဗားရှင်းသစ်နှင့်အတူတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းရဲ့ contents ရွှေ့, လိုအပ်သောစကားလုံးများကို, အရာဝတ္ထု, ဒြပ်စင်အဘို့အရှာဖွေရေးပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းဖို့ပိုပြီးအဆင်ပြေဖြစ်လာသည်။ အခုဆိုရင်သင်က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်ဦးအညွှန်းဖြစ်ပါတယ်သင်တို့သိကြ၏။